ဤသည်ဥပဒေရေးရာအသိပေးစာအင်တာနက်အသုံးပြုသူများမှမရရှိနိုင် Webassistance.es သော URL ကို https://solitariosinvisibles.org (လျှော့, ဝက်ဘ်ဆိုက်) မှာသုံးစွဲနိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ access ကိုနှင့်အသုံးပြုခြင်း၏အထွေထွေအခြေအနေများထိန်းညှိ။
ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အသုံးပြုမှုကိုအပြည့်အဝနှင့်ကွှငျးမဲ့တစ်ဦးချင်းစီ၏လက်ခံမှုနှင့်ဤဥပဒေရေးရာသတိပြုပါလက်ခံမှုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှပြဋ္ဌာန်းချက်ဆိုလို။ အကျိုးဆက်ဝက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုသူဂရုတစိုက်ပြုလုပ်စာသားဝဘ်၏ပိုင်ရှင်များ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ကတည်းကဝဘ်သုံးစွဲဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အပေါ်အခါသမယ၏တစ်ဦးချင်းစီကဒီဥပဒေရေးရာသတိပြုပါဖတ်ပါ, ဒါမှမဟုတ်ကြောင့်ဥပဒေပြုပြောင်းလဲမှုရမယ် , ဥပဒေသိပ္ပံသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလေ့အကျင့်။
ကွန်ရက် 1.- ပိုင်ဆိုင်မှု။
ဒါရိုက်တာ၏အမည်: Andrea Zampedroni
မှတ်ပုံတင်ထားသောရုံးခန်း: Estudi အထွေထွေ,41A
ပြည်သူ့အင်အား: Palma de Mallorca
ခရိုင်: Balearic ကျွန်းများ
က CP: 07001
အဆိုပါက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုသူများအ Webassistance.es သူများကလူသို့မဟုတ်သူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားအဖွဲ့အစည်းများကထောက်ပံ့ပေးသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပေးရန်တူညီသော access ကိုပေးသည်။
web ၏ 3.- ရယူအသုံးပြုပါ။
ဝဘ်၏ 3.1.- အခမဲ့သုံးစွဲနိုင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း။
ယေဘုယျအားဖြင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ access ကိုနှင့်အသုံးပြုမှုကြောင့်အသုံးပြုသူကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းထားသို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်မလိုအပ်ပါဘူး။
web ၏ 4.- မာတိကာ။
web ပေါ်မှာကိုင်ဆောင်ထားသူအသုံးပြုသောဘာသာစကားဟာရှေဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါ comprehension တာဝန်ရှိသည်ဒါမှမဟုတ် user ကဝဘ်၏ဘာသာစကား, သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အကျိုးဆက်များကိုနားလည်မပေး Webassistance.es ။
Webassistance.es အသိပေးစာမပါဘဲ contents တွေကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း, ဝက်ဘ်ဆိုက်အတွင်း၌နှင့်မည်သို့သူတို့ဝင်ရောက်နေကြသည်သူတို့ကို delete နဲ့ပြောင်းလဲမျှတမှုမရှိဘဲနှင့်လွတ်လပ်စွာသူတို့ဟာစေနိုငျသောအကျိုးဆက်များများအတွက်တာဝန်ယူပြီးမပြုစေခြင်းငှါ အသုံးပြုသူများသည်။
ဝဘ်ရဲ့ contents ၏အသုံးပြုမှုကိုရရှိနိုင်လုပ်ဒီဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ကို အသုံးပြု. ကြော်ငြာသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်ပေးပို့ Webassistance.es ၏ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ, မြှင့်တင်ရန်စုဆောင်းသို့မဟုတ်ကြော်ငြာသို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်တတိယပါတီများမှမှတားမြစ်ထားသည် မသက်ဆိုင်အသုံးပြုမှုအခမဲ့သို့မဟုတ်မရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. အသုံးပြုသူများကို။
ဒီ website ကိုရည်ရွယ်၎င်းတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များအပေါ်တတိယပါတီများမှထည့်သွင်းကြောင်း links သို့မဟုတ် hyperlink များ, တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်, ဖော်ပြ, မှားယွင်းသောတိသို့မဟုတ်အထင်အမြင်မှားစေလက္ခဏာများသို့မဟုတ်မတရားသို့မဟုတ်တရားမဝင်လုပ်ရပ်များအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံလို့မရဘူး, အပြည့်စုံက်ဘ်ဆိုက်၏အဖွင့်အဘို့ဖြစ်လိမ့်မည် Webassistance.es ဆန့်ကျင်
liabilities ၏ 5.- Limited ။
ဝဘ်နှင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသုံးစွဲခြင်းမှဝင်ရောက်ခွင့်နှစ်ဦးစလုံးသည်ထိုပါရှိသောအချက်အလက်များ၏လုပ်နိုင်ပါတယ်အသုံးပြုသူရဲ့တစ်ဦးတည်းသောတာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောလက်လှမ်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုကနေပျေါပေါကျစခွေငျးငှါမညျသညျ့အကျိုးဆက်သို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာဝန်မယူ Webassistance.es ။ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါလုံခြုံရေးအမှားအယွင်းများအတွက်သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူရဲ့ကွန်ပျူတာစနစ် (ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲ), သို့မဟုတ်၏ရလဒ်အဖြစ်မြို့သားသိမ်းထားတဲ့ဖိုင်တွေသို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းများစေဆိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာဝန်မယူ Webassistance.es:
- ကို browser တစ်ခုချွတ်ယွင်း,
- နှင့် / သို့မဟုတ် Non-updated ဗားရှင်းများအသုံးပြုခြင်း။
အခြားသူများကိုမဖွင့်ဘို့အဝဘ်သို့ထည့်သွင်းဖြစ်ကြောင်း hyperlink များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်မြန်နှုန်းများအတွက်တာဝန်မယူ Webassistance.es ။ ဤအလင့်များ၏အသုံးဝင်မှုကိုအာမခံမပေး Webassistance.es, မကအသုံးပြုသူသည်ဤလင့်ခ်မှတဆင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်ဖို့အကြောင်းအရာများကိုသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိသည်, မဒီဆိုက်များ၏သင့်လျော်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာ။
ဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ်ကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ဤ website တွင်လင့်များမှတဆင့်ဝင်ရောက်နေကြသည်ကြောင်းကိုသင်၏က်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုရယူသုံးအသုံးပြုသူများအများ၏စနစ်များသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာများကိုပျက်စီးစေခြင်းငှါအခြားကွန်ပျူတာအစီအစဉ်များအတွက်ထိုက်မဖြစ် Webassistance.es ။
နည်းပညာ "cookies" ၏ 6.- အသုံးပြုခြင်း။
ဝဘ်အမြဲအတူတူပင်၏လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့် privacy ကိုလေးစား, အသုံးပြုသူကမှတဆင့်က navigate တဲ့အခါမှာသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းများအတွက် cookies တွေကိုသို့မဟုတ်အခြားမမြင်ရတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုမသုံးပါဘူး။
* ကွတ်ကီးများအသုံးပြုမှုသုံးစွဲခဲ့တဲ့လျှင် cookie ထုတ်ပြန်ချက်မေးအဆိုပါ site ကို cookies များကိုအသုံးပြုသင်တို့ရှိသမျှအချိန်တိုင်းအတူတူပင်၏လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့် privacy ကိုလေးစားကျွန်ုပ်တို့၏ကွတ်ကီးပေါ်လစီတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
7.- Intellectual Property ။
သူတို့က web ၏ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအပေါငျးတို့သအခွင့်အရေးများအဖြစ်အကြောင်းအရာများကို၎င်း, Webassistance.es ကပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမဆိုသုံးစွဲခြင်းသီးသန့်အထူးသဖြင့်ဇာတ်ကောင်ဖြစ်ရလိမ့်မည်။ ဒါဟာ .......... များအတွက်သီးသန့်ကူးယူ, မျိုးပွား, ဖြန့်ဖြူး, အသွင်ပြောင်းပြည်သူ့ဆက်သွယ်ရေးသို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ရဲ့ contents ၏အားလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမဆိုတခြားအလားတူအရေးယူမှုပါဝင်သောအခြားမည်သည့်အသုံးပြုမှု reserved ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်မည်သည့်အသုံးပြုသူသယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် Webassistance.es ၏ကြိုတင်ရေးထားလျက်ရှိ၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲထိုအလုပ်ရပ်များ
Webassistance.es အဆိုပါအော်ဂဲနစ်ဥပဒေ 15 / 1999 ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များ, ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု၏ 13 ဒီဇင်ဘာလနှင့်အညီကျနော်တို့ရဲ့ client ကိုကုမ္ပဏီများနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးမဆိုကြင်နာ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်လျှို့ဝှက်အာမခံပါသည်။
Webassistance.es သို့မဟုတ်ယင်း၏ပုဂ္ဂိုလ်များမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ client ကိုကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ထောက်ပံ့အားလုံးသတင်းအချက်အလက်, အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်မေတ္တာရပ်ခံန်ဆောင်မှုပေးဖို့မရှိမဖြစ်, Webassistance.es ၏တာဝန်အောက်မှာဖန်တီးထိန်းသိမ်းထားတစ်ခု automated ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာတွင်ထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်။
ပေးထားသောဒေတာများကိုဤကိစ်စတှငျ Webassistance.es တရားဝင်လိုအပ်သောကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဆင့်ဆင့်မွေးစားထားပြီးသားအပေါင်းတို့သည်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအစီအမံကို install ထားပြီးလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ချက်များစည်းမျဉ်းများ (ဒီဇင်ဘာလ၏တော်ဝင်အမိန့် 1720 / 2007 21) နဲ့အညီပြုမူဆက်ဆံပါလိမ့်မည် တတိယပါတီများအားဖြင့်အရှုံး, အလွဲသုံးစားလုပ်, အပြောင်းအလဲတချို့, ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့စွန့်ပစ်ခြင်း။ သို့သော်အသုံးပြုသူအင်တာနက်လုံခြုံရေးအစီအမံ impregnable မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုသတိထားမိဖြစ်သင့်သည်။ အဲဒါကိုသင့်လျော်သောယူဆပါလျှင်၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသည်အခြားအဖွဲ့အစည်းများသို့လွှဲပြောင်းဖြစ်ကြောင်း, အသုံးပြုသူသဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့် ပတ်သက်. မိမိအခြောအတှကျသည်, လွှဲပြောင်းအချက်အလက်များ၏ဖိုင်နှင့် transferee ၏အမည်နှင့်လိပ်စာ၏ရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းကြားပါလိမ့်မည်။
RGPD ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အတူလိုက်နာမှုမှာတော့အသုံးပြုသူ access ကို, ချက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်း, ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့်အတိုက်အခံများ၏မိမိတို့၏အခွင့်အရေးများကိုလေ့ကျင့်လိမ့်မည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကိုသင် andreazampedroni@gmail.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်သင့်
ဤသည်ဥပဒေရေးရာသတိပြုပါစပိန်ဥပဒေနှင့်အညီလုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်အုပ်ချုပ်ရလိမ့်မည်။ ဖော်ပြလျှောက်ထားစေခြင်းငှါအခြားမည်သည့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် waiving Webassistance.es နှင့်သုံးစွဲသူများ, ကိုရယူသုံးသို့မဟုတ်ဝဘ်သုံးပြီးအထဲကပေါ်ထွန်းစေမည်အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာအငြင်းပွားမှုများအတွက်မှတ်ပုံတင်အသုံးပြုသူ၏တရားရုံးများနှင့်ခုံရုံးမှတင်ပြရမည်။ အသုံးပြုသူစပိန်, Webassistance.es နှင့် Webassistance.es ၏အတည်တကျနေထိုင်ရာမြို့ရွာများ၏အသုံးပြုသူတင်ပြရန်, ဖော်ပြအခြားမည်သည့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် waiving, တရားရုံးပြင်ပမှာနေထိုင်သောဖြစ်ရပ်အတွက်